नवरात्रिको अन्तिम तीन दिनहरू अर्थात् सातौँ, आठौँ र नवौँ दिनहरूमा सत्त्व गुण प्रबल हुन्छ, अनि यी दिनहरू देवी सरस्वती प्रति समर्पित छन् । सद्‌गुरु सत्त्व गुणको बारेमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ...
चार वर्ण व्यवस्थाको निर्माण किन र कसरी गरिएको थियो ?
हाम्रो संस्कृतिमा भएको वर्ण व्यवस्था अन्यायपूर्ण र अनुचित जस्तो देखिन्छ— मानिसहरूलाई पेशा वा जन्मको आधारमा बाँडिनुको कारण के हो ? के सदैव यस्तै थियो ? अनि, के जातिय व्यवस्थालाई समाप्त गर्नाले आज त्यससित जोडिएका समस्याहरू समाधान हुन सक्छन् त ?